क्वारेन्टाइनमा बस्नेले मासुभात र रक्सी मागेपछि हंगामा, रक्सी र वाइफाई नदिएकाे भन्दै ताेडफाेड ! « Bagmati Online
चित्रबहादुर केसीको टिप्पणी- केपी ओली ‘कामरेड रहेनन्, दामरेड’ भइसके !
हरिद्वारमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई सम्झिँदै पूर्वराजाले भने– हामीले आफ्नो धर्म बचाउनु छ (सम्बोधनको पूर्णपाठ)
जसपा न यता न उता : तत्काल ओली सरकार नढाल्ने पक्षमा
युरोप जाने चक्करमा मलेसियाको कमाइ स्वाहा !
सरकारमा आयौं भने बूढानीलकण्ठ शैलीको ५ सय स्कुल बनाउँछौं
इजरायल रोजगारीको लागि चैतमै आवेदन लिन सुरु गरिने
लाईसेन्स नभएका शिक्षकका लागि शिक्षक सेवा आयोगले तत्कालै यसरी दिदैछ लाईसेन्स
जाने हाे इजरायल : अब खुल्दै छ आवेदन, यस्तो छ प्रक्रिया !
क्वारेन्टाइनमा बस्नेले मासुभात र रक्सी मागेपछि हंगामा, रक्सी र वाइफाई नदिएकाे भन्दै ताेडफाेड !
२२ वैशाख, खोटाङ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभरि २२ हजार ९७८ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । यो संख्या देशभरि उपलब्ध बेडभन्दा आधा कम हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार कुल ४९ हजार १४४ वटा बेड छन् । तीमध्ये २६ हजार १६६ बेड खाली छन् ।
यतिका धेरै बेड किन खाली त ?
‘बस्नैपर्नेहरूले पनि सकेसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्न नपरे हुन्थ्योजस्तो गर्छन्’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आशंकित ठाउँबाट फकर्नेहरूले समेत क्वारेन्टाइन भनेको सरकारका लागि बसिदिने हो जस्तो गर्छन् ।’ कोभिड–१९ (नोवल कोरोना भाइरस) महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि बनाइएको क्वारेन्टाइनमा राख्न कति गाह्रो छ भन्ने बुझ्न खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको अवस्था हेरे पुग्छ । नगरपालिकाले ४७ वटा बेड बनाएको छ । प्रत्येक वडामा ३ देखि ५ वटासम्म बेड पनि तयार छन् ।
हलेसी तुवाचुङमा दुई हप्ता क्वारेन्टाइनमा बसेका पहिलो लटमा ९ र दोस्रो लटमा १४ जना र्‍यापिड डाइनोनेस्टिक किट टेस्ट (आरडीटी) नेगेटिभ देखिएपछि घर फर्किसकेका छन् । अहिले १३ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । त्यहाँ बस्नेहरूका लागि नगरपालिकाले साँझ बिहान दाल–भात, तरकारी र चिया, खाजाको व्यवस्था गरेको छ । हप्तामा एक दिन मासुको पनि व्यवस्था गरिएको छ । क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूले माग गरेपछि हप्तामा दुई पटक मासुको व्यवस्था पनि भयो । तर, यो माग पूरा भएपछि दिनहुँ मासु–भात, रक्सी र वाईफाईको माग आएको नगरस्तरीय कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण सर्वदलीय सर्वपक्षीय समन्वय समितिका एक सदस्यले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
‘दैनिक मासु दिन बजेटले पुग्दैन, रक्सी त झन नियमअनुसार नै दिन मिल्दैन भनेको, तोडफोडमै उत्रिए’ समन्वय समितिका ती सदस्य भन्छन्, ‘सम्झाई बुझाई त गर्‍यौं, फेरि बिरामी परेको बाहाना गरेर अर्को आपतमा पारे ।’
शर्त उल्लङ्घन गरेपछि क्वारेन्टाइन
यो नगरपालिकाले लकडाउनका कारण आपतमा परेका १ हजार ३६९ जनालाई विभिन्न स्थानबाट उद्धार गरेको थियो । उद्धार गर्नुअघि नै नगरपालिकाले अनिवार्य होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने लगायतका १० बुँदे ‘घर फिर्ती कबुलियतनामा’ गराएको थियो । तर, अनुगमनका क्रममा कतिपयले होम क्वारेन्टाइनको नियम उल्लङ्घन गरे ।nनगरवासीको उद्धारमा १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । तर, केन्द्रले भने अहिलेसम्म केही पनि सहयोग गरेको छैन । ती सदस्य भन्छन्, ‘क्वारेन्टाइन पालना गरेर घरमै बसुन् भनेर लाखौं खर्च गरेर उद्धार गर्‍यौं । तर, उनीहरू गाउँमा आएपछि मान्छे भेला पार्ने र होहल्ला गर्दै हिँडेको अनुगमनका क्रममा भेट्यौं ।’नियम उल्लङ्घन गर्नेमध्ये तीनजनालाई नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा राखिएको समन्वय समितिका एक सदस्य बताउँछन् ।
जीउ र बीउ जोगाउन लागेका छौं : नगर प्रमुख राई
जिल्ला सदरमुकाम दिक्तेल बजारबाट करिब ४५ किलोमिटर पश्चिममा रहेको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका सुनकोसी किनारमा अवस्थित छ । ३२ हजार ४४६ जनसंख्या रहेको यस नगरपालिकका बासिन्दालाई खडेरीका कारण गत वर्षको दशैंमै राहत बाँड्नुपरेको नगर प्रमुख इबन राई बताउँछन् । त्यतिबेला प्रतिव्यक्ति १० किलोका दरले चामल उपलब्ध गराएको उनले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । यसपालि पनि राहतसँगै मकैको बीउ पनि वितरण गरिएको नगर प्रमुख राई बताउँछन् । उनका अनुसार ५ हजार ८३८ घरधुरीलाई जनही ४ किलोका दरले बीउ वितरण गरिएको छ ।
प्रत्येक वडालाई राहत वितरणका लागि ७५ हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । राई भन्छन्, ‘हामीले ज्याला, मजदुरी गरेर खानेका लागि मात्रै राहत दिएका छौं ।’नगरपालिकाले राहतमा भन्दा सहुलियत खाद्यान्नमा जोड दिएको देखिन्छ । सहुलियत दरमा खाद्यान्न वितरणका लागि प्रतिवडा १० देखि १५ लाख वितरण गरिएको राइले जानकारी दिए ।
संघीय सरकारको सहयोग छैन
कोरोनाको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीका लागि १० लाख रुपैयाँ जीवन बीमा गरिएको छ । नगरवासीको उद्धारमा १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । तर, केन्द्रले भने केही पनि सहयोग गरेको छैन । नगर प्रमुख राई भन्छन्, ‘संघीय सरकारले प्याकेज घोषणा गरेको भन्ने सुनेका छौं । तर, अहिलेसम्म आइपुगेको छैन ।’ प्रदेश १ सरकारले १० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि यो रकम पनि नगरपालिकामा आइसकेको छैन । रकम अभाव भएपछि विभिन्न शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरेर काम गरेको उनले जानकारी दिए । जनप्रतिनिधिको भत्ता र कर्मचारीको तलब समेत कटौती गर्दा पनि रकम अपुग भएको राई बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति : २०७७ बैशाख २२ गते सोमवार
एमाले केन्द्रीय सदस्य सोम मिश्रद्वारा माधव समूह परित्याग !
दल, राजनीति र नेताका समाचार बन्द रौं, सुन्दा सुन्दा दिग्दार लाग्योः भोजराज पोखरेल !
रुकमाङ्गदको प्रश्न- शक्तिमा जानु थियो भने, पैसा नै कमाउनु थियो भने त्यति धेरै मानिस किन मा’रेको होला ?
मलेसियाबाट ल्याइयो १२ श व, विमानस्थल पुगेका डा. बाबुराम भट्टराईको थामिएन आँ शु